Resources – Page2– Featured Collectives
All posts filed under “Resources”
Streeet Photography Resources
Street Photography ရဲ့ သမိုင်း – အပိုင်း (၂)
၁၁။ လူမှုဗေဒနဲ့ Street Photography Street Photography မှ ချဉ်းကပ်ပုံ ချဉ်းကပ်နည်း အမျိုးမျိုး ရှိကြပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အခိုက်အတန့်များ၊ သမိုင်းဖြစ်ရပ်၊ အမြင်ပုံရိပ်များ ဒါမှမဟုတ် လူမှုရေးဆိုင်ရာများကို မှတ်တမ်းတင်ရတာကို စိတ်ဝင်စားကောင်း ဝင်စားနိုင်ပါတယ်။ Lewis Hine ကတော့ လူမှုဗေဒဘက် အားသန်တဲ့ Street Photographer တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဟာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီး ကောင်းစွာဖွဲ့စည်းထားရုံမက လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပါယ်တွေဖော်ပြနိုင်ဖို့လည်း အားထုတ်ထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ပုံတွေက အခြားသူများကို လူမှုအခြေအနေတစ်ခုအကြောင်း သတင်းပေးနိုင်တဲ့ပုံများအဖြစ် ဖန်တီးလိုပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ပုံများက လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းမှာ အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်စေတဲ့ ပုံများဖြစ်လိုပါတယ်။ Hine အနေနဲ့ […]
Street Photography ရဲ့ သမိုင်း – အပိုင်း (၁)
Street Photography ရဲ့ သမိုင်းကိုရေးသားတဲ့စာအုပ် အနည်းငယ်သာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့အနည်းငယ်သော စာအုပ်များထဲမှာ “Bystander: A History of Photography” စာအုပ်ဟာ အင်မတန် ကောင်းမွန်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ယင်းစာအုပ်ကို ဓာတ်ပုံပြပွဲများ စီစဉ်သူနဲ့ သမိုင်းပညာရှင်ဖြစ်သူ Colin Westerbeck နဲ့ နာမည်ကျော် street photographer တစ်ဦးဖြစ်သူ Joel Meyerowitz တို့ ပူးတွဲ ရေးသားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ဖြစ်ဖို့အတွက် သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ နှစ်အတော်ကြာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါတယ်။ စာရေးသားမှုပိုင်းကို Westerbeck က အများဆုံး ပြုလုပ်ပြီး Meyerowitz ကတော့ […]
Street Photography မှာ အဖြူအမည်း သို့မဟုတ် ကာလာအဖြစ်ထားဖို့ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲ?
Eric – Street ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဟာ ဘယ်လိုအချိန်မှာ အဖြူအမည်း ဒါမှမဟုတ် ကာလာနဲ့ဖြစ်သင့်သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မကြာခဏဆိုသလို ဓာတ်ပုံအသိုင်းအဝိုင်းက ကျနော့်ကို မေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းဟာ ကျနော့်ကိုကျနော် နေ့စဉ်မေးမိတဲ့ မေးခွန်းလည်းဖြစ်ပြီး သိပ်ထူးချွန်တဲ့ နျူးယောက်က Street ဓာတ်ပုံရိုက်သူ James Maher ကို ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဖတ်ရတာ နှစ်သက်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ James – Street Photography ဆိုတာ ရှိခဲ့တာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ဝနှစ်ကျော်အချိန်တုန်းက ဓာတ်ပုံရိုက်သူဟာ အိမ်ကမထွက်ခင်ကတည်းက ကာလာဖလင်လား အဖြူအမည်းဖလင်သုံးမှာလား ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်မှာတော့ […]
ဓာတ်ပုံတွေကို crop လုပ်သင့်သလား?
ပုံတွေကို ဖြတ်တောက်ခြင်း (cropping) က ပိုကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံဖြစ်လာစေသလား။ဥပမာ Henri Cartier-Bresson ရဲ့ ကျော်ကြားတဲ့ ဓာတ်ပုံကို ကြည့်ပါ။ ဓာတ်ပုံကို ဖြတ်ထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူက နံရံမှာရှိတဲ့ အပေါက်ထဲကနေ ရိုက်လို့ပါတဲ့။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ဒီပုံကို သူ ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဖြတ်လိုက်တာက ပုံကို ပိုကောင်းသွားစေတယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။Elliot Erwitt ရဲ့ တော်တော်ကြီးကို ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ခု။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ ပုံတွေအားလုံးကို ဖြတ်တောက်သင့်သလား။ ယေဘုယျအားဖြင့် မဖြတ်တောက်သင့်ဘူးလို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ဖြတ်တောက်ခြင်းက သင့်ကို ပျင်းရိတဲ့ ဓာတ်ပုံသမားတစ်ဦးဖြစ်စေတယ် (အနည်းဆုံးတော့ ကျနော့်ကို […]
Street Photographer လုပ်သင့်၊ မလုပ်သင့်?
Street Photography မရိုက်ဖို့ အဓိကအကြောင်းရင်း ၆ချက် ၁ – သင့်ပုံတွေဟာ ‘like’ အများကြီးရမှာ မဟုတ်။လူမှုကွန်ရက် social media တွေမှာ အများစုက Street Photography ရဲ့ အနုပညာကို တန်ဖိုးမထားကြဘူး။ ကြောင်နဲ့ ပန်းတွေကိုရိုက်တဲ့ပုံတွေက ‘like’ ပိုရတတ်ပါတယ်။ ၂ – သင့်ဓာတ်ပုံတွေဟာ ရောင်းစားလို့မရဘူး။ဓာတ်ပုံဆရာက နာမည်ကြီးမဟုတ်ရင် လူတွေက street ဓာတ်ပုံတွေကို ဝယ်လေ့မရှိပါဘူး။ ၃ – Street photography နဲ့ ပိုက်ဆံရှာလို့မရဘူး။ကင်မရာကိုင်ပြီး လမ်းပေါ်လျှောက်သွားကာ လူတစိမ်းတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ဘယ်သူကမှ ပိုက်ဆံပေးပြီး မခိုင်းဘူး။ […]
Street Photography အကြောင်းပြောကြတဲ့အခါ အဓိကပြဿနာက ကျွန်တော်တို့ တုတ်ထမ်းဓါးထမ်းပြောရဖို့များတယ်လို့ဆိုရမယ်။ Street Photography က တခြားဓါတ်ပုံအမျိုးအစားတွေလို ရိုးရှင်းမနေဘူး။ သူက စာပေနဲ့ယှဉ်ပြောရင် ကဗျာအနုပညာနဲ့ဆင်မယ်လို့ထင်တယ်။ တိတိပပဖော်ပြဖို့အဆင်မပြေဘူး။ သူ့ဆီကထွက်လာနိုင်တဲ့ Possibility Outcome တွေက အရမ်းများနေတယ်။ ဥပမာ – ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ပို့စ်ပေးခိုင်းပြီးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီ့ထွက်လာတဲ့ပုံကို ကောင်းတာမကောင်းတာအပထား ဟာ မင်းဟာ Portrait ရိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပေမယ့်၊ လမ်းမှာ စျေးထိုင်ရောင်းနေတဲ့ အဖိုးကြီးဖြစ်ဖြစ် အဒေါ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ကို ရိုက်လာပြီး Street Photography လို့ပြောဖို့တော့ နည်းနည်းလေးအခက်အခဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ကိစ္စကိုပဲ ငြင်းကြခုံကြရန်ဖြစ်ကြက ဒီနေ့အထိရှိနေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဟိုတလောက […]
ပုံကိုအရမ်းပြင်ရတယ်ဆိုရင် ပုံမကောင်းလို့ပဲလို့ခံယူထားတဲ့ ဒီးဒီးနဲ့တွေ့ဆုံခြင်း
FC ရဲ့ ဒီလအင်တာဗျူးအစီအစဉ်မှာ Miami Street Photography Festival, 2017 မှာ Finalist ဝင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်က Street Photographer နှစ်ယောက်ကိုမေးမြန်းဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ ယခုဖော်ပြမယ့်အင်တာဗျူးကတော့ အဲ့ဒီ့နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒီးဒီးဆိုတဲ့သူနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ခင်ဗျားက FC နဲ့မစိမ်းတဲ့သူဆိုရင်တော့ ဒီးဒီးကိုမသိစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ သူ့ပုံတွေက FC မှာ အမြဲတမ်းဝေဝေဆာဆာဖော်ပြခံရလေ့ရှိတဲ့သူ။ နောက် သူက Street Photo Myanmar ဆိုတဲ့ Facebook Group ရဲ့ founder တစ်ဦးလဲဖြစ်သူ။ လောလောဆယ်တော့ အမေရီးကားမှာနေရင်း Street Photo တွေ နေ့တိုင်းထွက်ရိုက်နေတဲ့သူ။ သူ […]
မြန်မာ Street Photography Page တွေရဲ့နောက်ကွယ်က ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးတွေရေးနေသူတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း (ကိုနိုင်သူစိုးသို့ ပြန်ကြားချက် )
ကိုနိုင်သူစိုးသို့ ပြန်ကြားချက် ပထမဦးဆုံး ကိုနိုင်သူစိုးကို မေးခွန်းတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောလိုပါတယ်။ နောက်လာမဲ့ FCအင်တာဗျူးတွေမှာ ဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေစေချင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ ကိုချစ်က ဖြေဆိုတော့ ကျနော် ဝင်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းတွေဟာ Street ရိုက်သူတွေ တစ်ချိန်ချိန်မှာ မိမိကိုယ်ကို မေးလာရမယ့် မေးခွန်းတွေပါပဲ။ ကျနော်တို့တတွေ Street ပုံတွေရိုက်နေရုံသာမျှမဟုတ်ဘဲ ဘာကြောင့်၊ ဘာလို့၊ ဘာကို၊ မိမိရဲ့ လာရာ၊ လားရာ စတာတွေ မိမိကိုယ်ကို မေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာ ကျနော် ပြန်ဖြေတာတွေဟာ ကျနော့် ယူဆချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေများနဲ့ ကွဲလွဲမှုတွေ ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေကို ကြားချင်ပါတယ် […]
မြန်မာ Street Photography Page တွေရဲ့နောက်ကွယ်က ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးတွေရေးနေသူတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
FC ရဲ့ ဒုတိယမြောက်အင်တာဗျုးအတွက် စဉ်းစားတော့ နည်းနည်းလေးလည်း ထူးခြားအောင်၊ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ Street Photography ချီတက်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာ ရှေ့ကိုထွက်မလာပဲ နောက်ကွယ်ကနေအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ကို ဆွဲထုတ်ချင်တာနဲ့ MMSP ကနေစပြီး FC အထိ အလုပ်ဘယ်လောက်များများ Street Photography နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေ အစဉ်တစိုက်ဘာသာပြန်ပေးခဲ့တဲ့သူ၊ ကိုယ်တိုင်လည်း Street Photo တွေရိုက်နေတဲ့သူကို အင်တာဗျူးဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်ပါဦး။ ၁) ကျေးဇူးပြုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိတ်ဆက်ပေးပါခင်ဗျ။ ကျနော့်နာမည် သီဟသူပါ။ Singapore, 2017. ၂) ဓါတ်ပုံပညာကို ဘယ်အချိန်ကစပြီး စိတ်ဝင်စားခဲ့တာလဲခင်ဗျ။ ကင်မရာကို […]